Uyikhuphele njani kwiVidiyo ye-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyikhuphele njani ividiyo kwi-Instagram?
Meyi 1, 2021 0 IiCententarios 252
Kwi-Instagram, sinokubona iindidi ezininzi zeevidiyo kunye nemifanekiso kwinethiwekhi yoluntu, esifuna ukwabelana ngayo, kodwa ngekhe uyikhuphele ukuze uyibone kamva okanye yabelwe abantu abangenayo loo akhawunti yentlalo.
Ke ngoko, siza kukubonisa olu khetho malunga nendlela yokukhuphela ividiyo kwi-Instagram.
Eli phepha libonelela ngokukhuphela iividiyo ze-Instagram ngokulula nangokulula ngokulandela amanyathelo ambalwa. Oku kusebenza kwisikhangeli okanye kwifowuni ke akukho ngxaki apho ukhuphela khona iividiyo.
Into ekufuneka uyenzile kukuya kwi-Instagram kwaye unike amanqaku amathathu avela kwiposti yevidiyo kukhetho lwe "Khuphela ikhonkco" kwaye uncamathisele kwiphepha oya kuthi ukhuphele kulo ividiyo. Emva koko qhubeka ucofe iqhosha lokukhuphela kwaye u-voila ukhuphele ividiyo ye-Instagram.
Eli phepha libonelela ukongeza ukukhuphela iividiyo ze-Instagram, unokukhuphela iireyels, amabali kunye neprofayili yento ofuna ukuyikhuphela.
Ukukopa kunye nokuncamathisela ikhonkco kwividiyo ofuna ukuyikhuphela, ungayenza inyathelo elinye. Ngokukwanjalo, unokuzikhuphelela ii-reels, oku kuphunyezwa kwe-Instagram ziividiyo ezimfutshane phakathi kwemizuzwana eli-15 ukuya kumzuzu, kwaye sele ithandwa ke ngoko ufuna ukuyibona nanini na ufuna.
Yiya kwiwebhu ye-Instagram.
Yiya kwiprofayili yomsebenzisi ofuna ukukhuphela iireels.
Cofa apha reel ofuna ukuyikhuphela.
Cofa kumanqaku amathathu avelayo, kwaye unike ikopi yekhonkco.
Yiya kwiphepha lokukhuphela iireels.
Cola ikhonkco levidiyo kwiphepha.
Ukulungele oko unokuzikhuphelela ii reels.
Khuphela iividiyo ze-Instagram (ngokukhawuleza okukhulu)
Esi sicelo sikuvumela ukuba ukhuphele Iividiyo ze-Instagram kunye neevidiyo ze-Instagram TV ngokukhawuleza nangokulula. Unokuzikhuphelela iividiyo kwibhetshi, unokuzikhuphela ngqo ngaphandle kokutshintsha usetyenziso.
Emva kokukhuphela iividiyo kwisicelo, ngokuzenzekelayo yenza ifolda apho iividiyo ozikhuphelayo ziya kugcinwa, kunye neefoto kunye nabasebenzisi obakhuphelayo abaneefolda zayo ezahlukeneyo.
Amanyathelo ekufuneka elandelwe ukusebenzisa usetyenziso:
Khuphela usetyenziso kwaye wenze ukhetho oluzenzekelayo lokukhuphela.
Emva koko, vula usetyenziso lwe-Instagram kwaye ukhethe ividiyo okanye nantoni na ofuna ukuyikhuphela ngokukopa ikhonkco.
Oku kuzakuqala ukhuphelo oluzenzekelayo lwefayile ofuna ukuyikhuphela
Kwaye voila uya kukhuphela iifayile ngala manyathelo alula.
Esi sicelo sichazwa ngoku:
Inkxaso yevidiyo zeTV ze-Instagram, iiRels, amaBali, iifoto kunye neevidiyo.
Unokuzikhuphelela izinto ezininzi ngaxeshanye
Inkcazo ephezulu yefoto kunye nombukeli wevidiyo
Ixhasa ukwabelana kunye nokushicilela kwakhona iifayile ezikhutshelweyo
Isantya sokutshaja ngokukhawuleza okukhulu.
Nceda uqaphele ukuba esi sicelo asihambelani okanye asichaphazeleki kwi-Instagram.
1 Ngamaphepha ewebhu
1.2 Gcina ii-Insta
2.1 Khuphela iividiyo ze-Instagram (ngokukhawuleza okukhulu)
Ungazikhuphela njani iimovie kwiYouTube?